म’र्दा–प’र्दा छिमेकी नै काम लाग्ने’ भन्ने उखान यहाँ लागू हुन सकेन…कसैले श’व उठाउन नमानेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष आँफैले संक्रमितको श’व उठाई व्यवस्थापन गरे ! – Khabar Patrika Np
म’र्दा–प’र्दा छिमेकी नै काम लाग्ने’ भन्ने उखान यहाँ लागू हुन सकेन…कसैले श’व उठाउन नमानेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष आँफैले संक्रमितको श’व उठाई व्यवस्थापन गरे !
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: २०:५५:१६
कोभिडको दोश्रो लहरमा अहिले नेपाल प्रभावित रहेको छ । यससँगै मुलुककै अत्याधिक प्रभावित जिल्लाको रुपमा रुपन्देही पनि रहेको छ । कोभिडकै कारण यहाँ दैनिक रुपमै स्थानीयहरुको ज्या’न गइरहेको छ । कसैले अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा ज्या’न गु’माई रहेका छन भने कतिपयको उपचार नै नपाई घरमै ज्या’न गई रहेको छ ।
अस्पतालमा ज्या’न जानेहरुको मृ’तकको आफन्तको समन्वयमा नेपाली सेनाले ब्यवस्थापन गरे पनि घरमै ज्या’न गुमा’उनेहरुको श’व ब्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन । रुपन्देहीमा यस्तै एक घ’ट’ना भएको छ । जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर २ कर्मडाँडाका ५१ वर्षिय चन्द्र बहादुर गुरुङ्गको कोभिडको कारण सोमबार बिहान मृ’त्यु भयो ।
३ भाई, १ श्रीमती र छोरा समेत कोभिड संक्रमित भएका उनको परिवारमा उनको श’व उठाउन सक्ने कोही भएन । घरमा श’व उठाउने कोही नहुदा टोल छिमेकले पनि यसमा चा’सो राखेन । कोभिड बिरामी गुरुङ्गको श’व घरबाट निकाल्न नै स्थानीयहरु ड’राए । उनको घरमा पस्ने समेत कसैले हि’म्म’त गर्न सकेनन् । ‘म’र्दा–प’र्दा छिमेकी नै काम लाग्ने’ भन्ने उखान यहाँ लागू हुन सकेन । कोभिड संक्रमितको श’व छुँदा आफूपनि संक्रमित हुने र आफ्ना बालबच्चा समेत जो’खि’ममा पर्ने त्रा’सले गुरुङ्गका छिमेकीहरु उनको घर पनि जान सकेनन् ।
श’व बारे ओमसतिया गाउँपालिकामा खबर भयो । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजकले पनि श’व ब्यवस्थापनको लागि छिमेकीको साथ मागे, तर उनलाई सहयोग गर्न कोही अगाडी आएनन् । श’व ब्यवस्थापनका कोही अगाडि नआएपछि स्वास्थ्य संयोजक दिपक ज्ञवालीले यस बारे गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवटलाई खबर गरे । बिहान साढे ७ बजे खबर पाएका गाउँपालिका अध्यक्ष केवट पनि छिमेकीहरुलाई २ घण्टासम्म श’व ब्यवस्थापनमा साथ दिन अ’नु’नय वि’नय गरे तै पनि कोही छिमेकी आएनन् ।
कोही अगाडि नसरेपछि केवटले गाउँपालिकाकै ट्रया’क्टरमा राखेर श’व ब्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे । ‘पि’पि’ई सेट ल्याएर परिवारको सहयोगमा श’वलाई गाउँपालिकाकै ट्रयाक्टरमा राख्यौ।’ केवटले भने ‘ट्रयाक्टरमा श’व राखिएकै कारण सो ट्रयाक्टर चलाउन पनि कोही अगाडि स’रेन, अन्ततः मैले नै उक्त ट्रयाक्टर हाँ’के’र कर्मडाडामै लगेर अ’न्ति’म सं’स्का’र गराए ।” केवटले यसलाई जनयु’द्ध र राजतन्त्र बि’रु’द्धको आन्दोलन भन्दापनि यस समयमा जनप्रतिनिधि हुनुको दायित्व बढी रहेको बताए ।
जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न भन्दा सयौं गुना सजिलो राजत’न्त्रको वि’रु’द्ध माओवादीद्वारा संचालित जनयु’द्ध थियो । उनले त्यतिबेला सानो ठूलो गरि बिभिन्न ५० भन्दा धेरै यु’द्ध लडेको र यस्तो यु’द्धमा एक जना साथीको ब’लि’दा’नी पछि सयांै साथीहरूले आफ्नो ब’लि’दा’नको लागि तयार हुने गरेको उनले स्म’रण गरे । ‘तर आज एउटा पनि सहयो’द्धा यस्तो भेटिएनन् कि साथ दिउन् उल्टै जिम्मेवारी पूरा गरेर नजिक आउन खोज्दा
साथीहरू टाढा भाग्ने अवश्यकता भन्दा धेरै ड’रा’उ’ने गरे ।’ केवटले भने । उनले थपे ,मेरो पनि परिवार छन् । तर, जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा मेरा लागि सबै भन्दा पहिला देश र जनता हुन् । जनप्रतिनिधि भएकोले मैले आफ्नो कर्तब्य मात्र निर्वाह गरेको हु । ’ गाउँपालिका अध्यक्ष भएर खाएको कसमलाइ शरीरमा प्र”ण रहुन्जेल आ’त्मसा’त् गरि निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रण गरेको उनि सुनाउँछन् ।